Ogaden News Agency (ONA) – Noora Afgaab – Cabdulaahi itoobiya iyo ina Suubane oo galaaftay maxaabiistii lasii dayn lahaa maxaaa kala haysta?
Noora Afgaab – Cabdulaahi itoobiya iyo ina Suubane oo galaaftay maxaabiistii lasii dayn lahaa maxaaa kala haysta?
Posted by ONA Admin	/ March 30, 2014
Sii dayntii maxaabiista ku xidhan jeel Ogaden miyay joogsatay? Su’aashaa ayaan weydiinay qaar la shaqeeya Cabdi Iley, waxayna si kooban ugu jawaabeen: Haa. Markaan weydiinay sababtana waxay yidhaahdeen; Dagaal ayaa ka dhacay oo waxaa isku laayeyey oo isku gacan qaaday Cabdulahi itoobiya iyo Mukhtaar Mahamed Suubane. Wuxuu ahaa qorshaha oo dadka loo sheegay in lasii daynayo 2000kun oo dadka halkaa ku tabaalaysan ah hasa ahaatee waxaa la siidayeyey oo kali ah 290. Waxaa ka dhashay xintan iyo hebel ayaa la siidayni iyo la siidayn mayo. Ka dibna Cabdi iley ayaa amray in albaabada loo xidho. Labada ninee hadda isku haysta awooda maxaabiista iyo gabi ahaan waxay ugu yeedhaan nabadgalyada waa ina Suubane iyo C/lahi Itobiya oo ah laba gacan ku-dhiigle oo amarada shacabka lagu laynayo ay kasoo fulaan. Taarikh Kooban:
Mukhtaar Sheekh Maxamed Waakuma?
Mukhtaar waa Nin dhalinyaro ah da’diisu Waa 30 Ilaa 35. Wuxu ku soo koray kuna aqliyestay halganka JWXO, waxaana la odhan karaa waxaaba korisay jabhada ONLF. Mukhtar muuna dhigan marna dugiyada asaasiga ah, mana jecela dadka wax bartay ama aqoonta leh. Waxana ma qoro waxana ma akhriyo, xataa farta Soomaliga. Waxaa madaxa loogu dhisaa kuwa ka soo xarooda jabhada waxana loo sheegaa in uu dadaal iyo daacadnimo halkas ku gaadhay kuna daydaan asaga waxaana aad ujecel Cabdi ilay.
Cabdulahi itoobiya isaguna;
Waa madaxweyne kuxigeen ahna hogaanka nabadgaliyada. Waa nin ka aqoon badan Mukhtaar, wuxuna in badan la soo shaqeeyy Cbdi ilay. Wnin dulqaad badan oo marka uu garaaco Cabdi ilay ma xanaaqo talada iyo amarka Cabdi ilayna horay ayuu ka qataa, marka Cabdi ilay sidaa ayuu ku jeceladay.
Hadaba bilihii ugu danbeyey waxaa xumaday xidhiidhka labadan nin, wuxuna gaadhay ficiltan iyo gacan ka hadal. Waxay soo caan baxaday kadib markii la damcay in la siidaayo 2200 maxbuus oo sanado badan ku xidhnaa jeelka dhexe ee loo yaqaano Jeel Ogaden. Waxaa la ogaaday kolkay maxaabiista dhexedeeda feedh isku bilabeen hebel ayaa la siidayn iyo la siidayn mayo. Waxaaba dhacaday in ragii Cabdulahi siidayey inuu dib u soo xirxiray Mukhatar.
Waxaa kaloo jirta in Mukhataar uu asaguna dhalinyaro ka shaqeyn jirtay xafiiskiisa ku eedeyey in ay xidhiidh la leeyahiin Cabdulahi itoobiya oo shaqada ka eryey.
Dadkii eheladooda ay ka xidhnaayeen oo filayay in loo soo daayo ayay arintan ku noqotay dhabarjab, waxaana hadda sheekada Jigjiga lau jaado ay noqotay yaa adkaan doono labadaa, yuuse u xaglin doonaa Cabdi iley oo maslaxadiisa uu ka dhex arki doonaa.